China Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 milina famokarana lafaoro famolavolana tontolo iainana sy mpanamboatra | Juda
Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 tsipika famokarana lafaoro famolavolana tontolo iainana
Masontsivana teknika sy latabatra fampisehoana
Fepetra fanoratana vato sokay
30-60mm, 40-80mm, 50-90mm
Haben'ny fanamiana sy madio
Tsy misy vovoka vato, tsy misy fotaka mavo eny ambonin'ny vato
Fepetra takiana arina
Sarany azo avy amin'ny kaloria
Tsy misy vainafo
Fenitra kalitao sokay
soda kaustika /%
Activity / ML
1 、 Ny fahaizan'ny famokarana natao dia 100-300 taonina sokay haingana isan'andro. Ny savaivon'ny vatan'ny lafaoro dia voafidy ho 4.0 -6.0meters, ny savaivony ivelany dia 6.5 -8.5meters, ny haavon'ny vatan'ny fatana fandoroana dia 30-33 metatra ary ny halavany dia 38-45meters.
2 come Ny vatosokay sy saribao manta dia avy amin'ny toeram-pitrandrahana sy toeram-pitrandrahana akaiky izay afaka mampihena ny vidin'ny fitaterana.
3, haben'ny poti-vato: 30mm-60mm, 40mm-80mm, 50mm-100mm
4 are Ny vato sy ny arina dia milanja marina araka ny lanjan'ny sensor.
5 、 Ny fitaovana marefo ao anatin'ity paikady ity dia sosona firebrick + sosona biriky mena + sosona iray vita amin'ny fibre silicate vita amin'ny alimo + ranon-drano.
6 、 Ny vovoka sy setroka misy vovoka dia mandray ny dingan'ny fanesorana ny vovoka amin'ny mpanangona vovoka cyclone + mpanangona vovoka karazana kitapo + mpamory vovoka desulphurization sarimihetsika anaty rano. Aorian'ny fitsaboana, ny vovoka dia esorina mifanaraka amin'ny fenitra eken'ny eo an-toerana.
7,Ny teti-bola dia manomboka amin'ny siny miady (manomboka) ka hatramin'ny Lime famafana fehin-kibo (fijanonana), tsy anisany ny fototra fanaovan-jirony, ny fananganana batching ary ny efitrano fanaraha-maso herinaratra
Tdingana echnological ：
Rafitra fandripahana: ny vato sy ny arina dia entina any anaty siny vato sy arina misy arina miaraka amina fehikibo; ny vato milanja dia ampidirina ao anaty fehikibo fampifangaroana amin'ny alàlan'ny mpamatsy.
Rafitra famahanana: ny vato sy ny arina arovana ao anaty fehikibo mifangaro dia entina mankany amin'ny hopper, izay ampandehanin'ilay winder mba hampielezana ny hopper ho an'ny fisakafoanana, izay manatsara ny habetsahan'ny fitaterana ary mahatratra ny fahombiazan'ny angovo sy ny angovo.
Rafitra mizara: ny fangaro ny vato sy arina dia ampidirina ao anaty hopper buffer amin'ny alàlan'ny feeder ary mankany amin'ny feeder rotary. Ny fangaro dia ampiarahina amin'ny ambaratonga ambony amin'ny lafaoro amin'ny alàlan'ny feeder rotary marobe.
Rafitra fanalefahana sokay: aorian'ny fampangatsiahana ny vato sokay vita sokitra, dia alefa amin'ny fehin-kodiarana sokay avy amin'ny masinina manala entana efatra sy faritra roa amin'ny valizy hidin-drivotra ny sokay vita. Raha sendra misy tifitra variraraka dia azo ahitsy ny lalana sy ny habetsaky ny famoahana sokay mba hahatratrarana ny tifitra sy ny fisintomana azy.
Rafitra fanesorana vovoka: aorian'ilay volavolan-tsolika nitaingina azy, ny vovoka misy setroka sy gazy aloha amin'ny alalàn'ny mpanangona vovoka cyclone hanala vovoka be dia be; Avy eo ao anaty sivana kitapo mba hanesorana vovoka kely amin'ny vovoka; Taorian'ny nidiranao tao anaty hantsana rano, ny flue hikosehana amin'ny sarimihetsika rano ny entona rehetra, ary ho lena ny setroka feno vovoka. Hiditra ao amin'ny farany ambany amin'ny fantsakan'ny vovoka izy miaraka amin'ny rano mikoriana ary avoaka ao anaty fitoeran-drano sedimentation. Aorian'ny rotsakorana, haverina ny rano madio.
Rafitra fanaraha-maso herinaratra: mandray ny rafitra fanaraha-maso solosaina Siemens Alemanina, tsipika famokarana mandeha ho azy tanteraka, fitehirizana vola, kalitaon'ny vokatra azo antoka.
Previous: Jiro kiln -300T / D tsipika famokarana-TetikasaEPC
Manaraka: Joba kiln -200T / D 3 andalana famokarana-TetikasaEPC
Fitaovana Kiln Kiln
Lime Kiln Kiln
Fomba fizahana kilaometatra
Fitaovana sokay mitsivalana
11. Rafitra famatsian-drivotra Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny lafaoro sokay dia tsy manome afa-tsy rivotra any ambany, izay tsy zaraina mitovy, ary mora tohina amin'ny fitrandrahana ampahany, fitrandrahana ny fotony, ny coking ary ny fanadiovana amin'ny sisiny. Ny rivotra avo lenta vokarin'ny mpankafy fandoroana miavaka dia miakatra amin'ny faritra fanaovana kajy amin'ny alàlan'ny faritra mangatsiaka any amin'ny farany ambany amin'ny lafaoro. Ny faritra mangatsiaka dia faritra fifanakalozana hafanana tokoa. Midina be ny maripana sokay rehefa miakatra ny hafanana voajanahary miaraka amin'ny lim ...
Distributor Style Snail
6.Horizontal feeder Ilay mpizara marindrano ny vatan'ny lafaoro dia manana rafitra manokana. Izy io dia afaka mampifangaro vatosokay sy arina arakaraka, mampidina ny teboka raikitra amin'ilay faritra preheating eo an-tampon'ny lafaoro, ary milamina sy malama ny vatan'ny arintany, ka nafanaina sy nodorana ny vatan'ny arina. Ny sokay isaky ny taonina dia mamonjy arina mihoatra ny 15 Kg raha ampitahaina amin'ny fomba hafa amin'ny fanaparitahana Fabricators, burners ary kojakoja hafa amin'ny lafaoro sokay: ny fitaovana fanampiana fanampiny amin'ny lafaoro sokay dia mamelona ahy ...
Valin'ny rivotra roa
10. Rafitra hidin-drivotra fanamafisam-peo mihidy roa ambaratonga: dia iray amin'ireo dingana ilaina amin'ny famokarana lafaoro makirana. Ny fitaovana fanonganana lavenona amin'ny ankapobeny dia ny fampijanonana ny rivotra sy ny lavenona famoahana, ity fitaovana ity dia ny hitazomana ny rivotra sy hamehezana ny lavenona: mandritra ny fanesorana ny lavenona, noho ny famehezana ny roofle roa, ny rivotra may dia tsy hivoaka avy ao ny tapany ambany, izay afaka manatsara ny kalitao sy ny fivoahan'ny sokay. firafitry ny fitaovana: mifangaro ny fitaovana ...
Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Manao Hydroxide Kalsioma, Anaran'ny varotra calcium oxide, Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide, Famoronana Hydroxide Kalsioma,